Odayaasha G/Hiiraan oo kalsonida kala noqday DFS & wasiiro Naqdiyay Goankas – SBC
Odayaasha G/Hiiraan oo kalsonida kala noqday DFS & wasiiro Naqdiyay Goankas
Xubno sar sare oo ka tirsan Odayaasha iyo waxgaradka gobolka Hiiraan ayaa meel ka istaagay Go’aamo Dowlada Federaalka Soomaaliya ay ka qaadatay gobolkaasi, kaas oo ay ugu soo magacawday Maamul aan isku dheeli tirneen waa sida ay odayaashaasi ku cabanayaane.
Mar ay la hadleen Saxaafada Odayaashan waxa ay ku dhawaaqeen in dowlada Federaalka Soomaaliya ay kalsoonidii kala noqdeen, sababo wax ka qabasho la’aan xaaladaha gobolka iyo soo magacaabista maamul aan la isku raacsaneyn.
Xildhibaano iyaguna ka tirsan Baarlamanka Soomaaliya islamarkaana ka soojeeda gobolka Hooraan ayaa dhankooda tilmaamay in Odayaashu gar u leeyihiin in ay kalsoonida kala noqdaan Dowlada, ka dib markii ay daraaseeyeen Talaabooyinka dolwadu u qaaday gobolkaasi Hiiraan.
Dhanka dowlada Wasiiro ka tirsan ayaa naqdiyay hadalka Odayaashaasi, waxaana ay ku tilmaameen in hadaladaasi yihiin kuwo la iska yiri aysanna go’aan ka gaari karin odayaasha hadlay kalsooni kala noqoshada dowlada .
Mudooyinkii ugu dambeeyay Magaalada Baladweyne Xarunta gobolkaasi Hiiraan waxaa ka talinayay Maamul dowlada federaalka Soomaaliya u soomagacowday gobolkaas waxaana maamulkaasi diidan oo ku tilmaamay mid aan loo dhameyn odayaasha iyo waxgaradka gobolka .
SBC International Baladweyne.